M/weynaha Puntland oo u duulay Kismaayo & Wararkii u dambeeyey, Jabiyeyna. -News and information about Somalia
Home Warkii M/weynaha Puntland oo u duulay Kismaayo & Wararkii u dambeeyey, Jabiyeyna.
M/weynaha Puntland oo u duulay Kismaayo & Wararkii u dambeeyey, Jabiyeyna.
Wararkii ugu danbeeyay ayaa sheegaya in wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne Siciid C/llaahi Deni uu ku sii jeedo maanta magaalada Kismaayo, isagoo jebinaya xayiraadda ay dowladda Somalia saartay magaalada Kismaayo.
Previous articleC/raxmaan Odawaa” Farmaajo inuu iga dhigo Guddoomiye Gobol ma rabo,”
Next articleWararkii ugu dambeeyey Xaalada B/weyne & Ciidanka La Wareegay
Xisbiga Wadani oo iskaga baxay heshiis uu horay ula galay Xisbiyada...